Eyona coil ilula yepokotho ikhuphe umatrasi ubukhulu obuphakathi obuphakathi ngokuqina okuqinileyo okuphezulu | Rayson
Rayson kwiRayson yeNdawo yezeMizi-mveliso, eHuasha Road, eShishan, eFoshan High-Tech Zone, eGuangdong, China. Ezona mveliso ziphambili Ikhoyili elula yepokotho ikhuphe umatrasi ubukhulu obuphakathi obuphakathi ngokuqina okuphezulu kuMthengisi ophezulu
Ukuthunyelwa okukhuselekileyo kunokuqinisekiswa kuthi.
Siyathembisa ukuba iimveliso zithunyelwa kubathengi zikhuselekile kwaye zivakala. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna ukwazi okungakumbi malunga nathi, Tsalela umnxeba ngqo. Ngaphezu koko, ukuhanjiswa kwethu ngexesha elifanelekileyo kwaye kunokuhlangabezana neemfuno zabo bonke abathengi. Kuyo yonke le nkqubo, iingcali zethu ze-QC ziya kubeka esweni inkqubo nganye yokuqinisekisa umgangatho wemveliso.
Uhlala ixesha elingakanani umatrasi wakho? Yonke imatrasi yahlukile. Ukuba uphosa ebusuku okanye uvuke ngentlungu lixesha lokuba ufumane umatrasi omtsha nokuba ungakanani na. Sincoma ukuba ujonge i-tag yomthetho kwaye utshintshe ubuncinci yonke iminyaka esibhozo. Ungacela inkampani yokubonisa ukuba ithathe isampuli kwinkampani yethu okanye ungasithumela i-DHL, i-FedEx okanye i-UPS yokuqokelela inombolo yeakhawunti, singathumela isampulu kuwe ngeakhawunti yakho.Ndingayindwendwela imveliso yakho? Ewe, wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu nangaliphi na ixesha, sikufutshane nesikhululo seenqwelomoya saseGuangzhou Baiyun, kungathatha iyure enye ngemoto, kwaye sinokucwangcisa imoto ukuba ikulande.